छिमेकी र आफन्त मलामी नगएपछि मुस्लिमले गरे हिन्दू संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि « गोर्खाली खबर डटकम
पर्सा – वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं. १३ राधेमाई टोलको उत्तरतर्फ रहेको करवोला । जोगीको कुटी छ । त्यही कुटीभन्दा थोरै उत्तरपश्चिम हुँदै श्रीसिया नदी बगेको छ ।
त्यही नदीको किनारमा वडा नं. १३ ,१४ का हिन्दूको अन्त्येष्टि गर्ने घाट रहेको छ । आइतबार दिउँसो १ बजेको टण्टलापुर घाममा नदी किनारमा केही मान्छेहरु काठको मचान मिलाउँदै छन् । शव जलाउनको लागि काठको चाङ मिलाउनेहरु मुस्लिम समुदायका देखिन्छन् । मुस्लिम समुदायमा शव गाड्ने चलन छ । तर उनीहरु शव जलाउनका लागि दाउराको बन्दोबस्त गर्दै थिए । त्यति नै बेला वडा नं १३ का वडाध्यक्ष तुफान अन्सारी पनि घाट पुग्नुभयो।